Kedu ihe bụ RSS? Gịnị bụ nri? Gịnị bụ ọwa? | Martech Zone
Ọ bụ ezie na ụmụ mmadụ nwere ike ịlele HTML, iji nweta nyiwe ngwanrọ iji rie ọdịnaya, ọ ga-adị n'ụdị enwere ike ịgụta ya. Formatdị nke ahụ dị n'ịntanetị bụ RSS na mgbe ị na-ebipụta ọhụrụ gị posts a format, a na-akpọ gị ndepụta. Site na ikpo okwu dị ka WordPress, a na-emepụta ndepụta gị na akpaghị aka, ị gaghị eme ihe ọ bụla.
Were ya na ị nwere ike wepu ihe niile eji mepụta saịtị gị ma na-eri nri na saịtị ma ọ bụ ngwa ọzọ. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe RSS mepụtara!
Kedu ihe RSS na-anọchi anya ya?
Otutu mmadu kwenyere na okwu RSS bu Àdịmnòtù Dị Ezigbo Mf. mana ede orginally Nchịkọta Saịtị bara ọgaranyaOriginally na mbụ Nchịkọta saịtị RDF.
Gini bu RSS?
RSS bụ akwụkwọ ntanetịime akwụkwọ (nke a na-akpọkarị a ndepụta or ndepụta weebụ) nke a na-ebipụta site na isi iyi - nke a na-akpọ ya ọwa. Nri ahụ gunyere ederede zuru ezu ma ọ bụ chịkọtara, na metadata, dị ka ụbọchị mbipụta akwụkwọ na aha onye edemede.
Nke a bụ obere vidiyo sitere na ndị folks na TechNewsDaily na-akọwa etu ndị ọrụ nwere ike isi jiri Syndication Really Simple (RSS) mee ihe:
Enwere ike iji faili RSS dị na ntanetị dị ka nri ebe ndị ọrụ na-edebanye aha na ọwa ha chọrọ ịgụ ugboro ugboro. Onye na-eri nri na-agwa ha mgbe enwere ọdịnaya emelitere ma onye ọrụ nwere ike ịgụ ya n’enweghị mgbe ị gara na saịtị ahụ! Nakwa, enwere ike iji nri mee ka ọdịnaya gị na weebụsaịtị ndị ọzọ (anyị na-egosi edemede anyị na DK New Media saịtị na Atụmatụ ịde blọgụ ụlọ ọrụ), ma ọ bụ enwere ike iji ya zụọ ọwa mgbasa ozi gị site na iji nyiwe dịka Feedpress, echekwa, ma ọ bụ TwitterFeed.
Oh - echefukwala denye aha na RSS RSS!
Tags: Nchịkọta saịtị rdfnchịkọta saịtị bara ọgaranyaRSSrss nrikedụ ihe rss kwụrụgịnị bụ ọwagịnị bụ ndepụtagịnị bụ ọwa ndepụtagịnị bụ nchịkọta rdf saịtịihe nchịkọta saịtị bara ọgaranyagịnị bụ ndepụta weebụgịnị bụ ọwa rssihe bụ n'ezie mfe syndicationkedu ihe rss
N'ebe ahụ, Doug. Ihe m ghọtara n'ezie !! Ekwenyesiri m ike.
Woohoo! Christine enweela ndidi. M na-na-na-ọzọ na ndị ọzọ oru na m posts. Achọpụtara m na ọ bụ oge iji belata ma nyere ụfọdụ ndị aka aka ịchụso.
Mgbe ị bụ geek mejupụtara ihe a, ọ na-esiri ike icheta na ọ bụghị onye ọ bụla ọzọ maara ihe ị na-ekwu!
Ihe ederede ikpeazụ na RSS. Were ya na iwepu ibe a di ka okwu na ihe osise n’isiokwu a… ma ewepu ihe ndi ozo di na ya. Nke ahụ bụ ihe ọkwa ahụ dị na ndepụta RSS!
Otu n'ime ihe m ga - eme bụ ịjụ Douglas ka o dee obere nkọwa nke ihe RSS n'ezie is.
Daalụ maka iku ahụ na-aga n'ihu, Doug. (na mmụọ nsọ maka akụkụ ọhụrụ na blọọgụ m, kwa 😉)
Ugbu a ị na-eche ihe isiokwu kọmputa ị ga-echetara oge ọzọ ị ga - ahụ onwe gị ọzọ na - agụ Akwụkwọ Jenesis lol.